Ololaha nadaafadeed iyo sare u qaadida bilicda magaalada Garowe oo si habsami leh u socda, shacabkuna ay soo dhaweeyeen. – Radio Daljir
Ololaha nadaafadeed iyo sare u qaadida bilicda magaalada Garowe oo si habsami leh u socda, shacabkuna ay soo dhaweeyeen.
Febraayo 13, 2011 12:00 b 0
Garowe, Feb 13 – Ololaha nadaafadeed ee ka socda magaalada Garowe ayaa qayb ka ah barnaamij sare loogu qaadayo bilicda iyo nadaafada magaalada oo ay dejisay dawlada hoose ee Garowe; waxaana ay qayb ka tahay dadaalka dawlada hoose ee Garowe ee sare u qaadaida bilicda magaalada, iyo ka hortaga cudurada ka dhasha qashinka la dhigo wadooyinka iyo xaafadaha dhexdooda.
Dawlaha hoose ee Garowe ayaa amar ku bixisay in xaafaduhu ay xil iska saaraan nadaafada iyo bilicda magaalada, una qoondaysay xaafadaha gaadiidka qashin gurka ee u sahlaya xaafadaha hawlaha nadaafada.
Ololaha nadaafada ayaa maanta ka socday xaafada Hodan ee magaalada Garowe, waxaana dawr wanaagsan ka qaatay dadweynaha xaafada, hawl-wadeenada dawlada hoose, iyo guddoonka laamaha xaafada.
Mawro Xalima Salaad Shire, ku xigeenka guddoomiyaha xaafada Hodan oo ka hadashay sida ay hawluhu u socdaan ayaa bogaadisay kaalinta shacabku ay ka qaataan nadaafada iyo bilicda magaalada.
Mawro Xalima ayaa ugu baaqday shacabka xaafadaha kale ee magaaladu in ay ku daydaan xaafadaha Israac & Hodan oo ololuhu ka hirgalay, ayna kaalin muuqata ka qaataan nadaafada iyo bilicda guud ee magaalada.
Qaar ka mid ah hawl-wadeenada laamaha xaafadaha ayaa ka cawday in aanay haysan dhammaan qalabkii ay qashinka ku guri lahaayeen, kana codsaday dawlada hoose in ay xaafadaha u keento qalabka ay u baahan yihiin si ay ugu sahlanaato fulinta hawlaha ay qabanayaan.
Madaxa xafiiska nadaafada ee dawlada hoose ee Garowe marwo Fatima Yusuf C/raxmaan ayaa ku ammaantay dadaalka xaafaduhu ay muujiyeen, ballanna ku qaaday in ay taageero la garab taagan yihiin hawl-wadeenaa xaafadaha.
Madaxada waaxda arrimaha bulshada ee dawlada hoose ee Garowe C/rashiid Ciise Cabdi ayaa ku booriyey hawl-wadeenada xaafaduhu in ay kaashadaan shacabka, shacabkana ugu baaqay in ay la shaqeeyaan guddiyada xafadaha.
Magaalada Garowe, caasimada Puntland, oo ka kooban 7 xaafadood ayaa ah magaalada ugu bilicsan ee magaalooyinka Puntland.
Cabdi Xasan Awoowe,
Qurbajoogta SSC oo ugu baaqay Somaliland in ay ka baxdo gobollada SSC, ayna joojiso colaada ay ka hurinayso mandaqada.